The Ambassador & Staff
SOMALI MISSION TO THE UNITED NATIONSStaff Members of the Permanent Mission of the Somali Republic H.E. Dr Elmi Ahmed DualeAmbassador Extraordinary and Plenipotentiary/PermanentRepresentative of Somalia to the United NationsDawladda Federaaliga ee Somalia waxay dhawaan u magacaawday Dr. Cilmi Axmed Ducaale in uu noqdo Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay ee magaalada New York ( USA). Dr.
Cilmi wuxuu ka mid yahay dhawrka siyaasiinta qaranka ee fara ku tiriska
ah ee aan gacmaha la galin qaska, siyaasad xun maamulka iyo dhiig qubaalka qaranka Soomaaliya. Dr. Cilmi wuxuu ku sifoobay takhtarkii ugu horeeyay ee loo soo tababaro
qaranka isla markaasna u adeegay qaranka horaantii 1960kii. Dr. Cilmi wuxuu horay uga soo shaqeeyay isbitaalkii caanka ahaa ee “De Martino ee Muqdisho.
Sidoo kale, wuxuu ahaa Agaasimihii Guud ee ugu horeeyay ee Wasaaradda Caafimaadka ka dib xuriyaddii qaranka ee Luulyo 1960. Waxaa xusid mudan in Dr. Cilmi uu ahaa Hormuudkii ugu horeeyay ee Kuliyadda Caafimaad ee Jaamacadda Qaranka ee Soomaaliya isla markaana uu ka ahaa Macallin Sare.
Horaantii 1969kii, Dr. Cilmi wuxuu ku biiray siyaasadda qaranka halkaas
uu noqday Xubin Barlamaankii Qaranka iyo Wasiirkii Arrimaha Dibedda ee dawladdi rayidka ahayd ee ugu dambeeysay. Kadib inqilaabkii hubaysnaa ee
milatari ee Oktoobar 1960, Dr. Cilmi wuxuu xabsi la galay siyaasiintii qaranka ee ciidamadu ku habiseen magaalada Afgooye. Wuxuu halkaas kula xiraa siyaasiin caan ku ah dalka oo ka mid ahaayeen Ra’iisul Wasaare (allaha u naxariistee) Maxamed Ibraahin Cigaal iyo Madaxweeyne Aadan Cabdulle Cusmaan, iyo qaar kaleba. Kadib markii laga soo deeyay xabsigii, Dr. Cilmi wuxuu ku biiray shaqaalaha hawlgalka caalamiga, halkaas uu ku biiray Haya’dda Caafimaadka Adduunka (WHO) sanadkii 1974tii. Dr. Cilmi wuxuu Haya’ddaas ka qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin: Sarkaal Caafimaad, Xiriiriye iyo Horjooge Mashaariic Caafimaad. Ugu dambaystii Dr. Cilmi wuxuu ahaa mudadii u dhaxaysay 1975tii ilaa 1999kii Wakiilka Haya’dda Caafimaadka Adduunka (WHO) u fadhiya dalalka Nayjeeriya, Tanzaaniya iyo Zanzibaar, iyo Eretariya. In kastoo Dr. Cilmi uu ka fariistay hawlihii tooska ahaa ee shaqadii Qaramada Midoobay, hadane, wuxuu ku sifoobay mid
aan ka hawgabin wax ku biirinta horumarinta caafimaadka adduunka iyo cilmibaarista siyaasadda caafimaadka adduunka iyo gaar ahaan tan Afrika.
Xeeshiisa iyo aqoontiisa waxaa laga dareemaa goobaha siyaasad hollinta mashaariicada caafimaadeed ee Afrika. Dr. Cilmi wuxuu ku dhashay magaalada Buulo-Burte ee gobolka Hiiraan sanadkii 1935tii. Wuxuu waxbarashadii Quaanka iyo waxbarashada Hoose/Dhexe uu qaatay magaalooyinka Buulo-Burte iyo Xamar. Wuxuu ka mid ahaa ardaydii nasiibka u yeelatay in ay wax ku bartaan Dusigii Macallim Jaamac Bilaal. Ka dib, Dr. Cilmi wuxuu waxbarashadii Dugsiga Sare ku qaatay Dugsiga Sare ee Xantuub ee magaalada Wad-Medan ee dalka Suudaan. Dr. Cilmi wuxuu sannadkii 1960kii ka qalanjebiyay Jaamacada Caafimaadka iyo Qalliinka ee Rooma (Talyaaniga) halkaas uu ku qaatay shahaadada “Takhtar Guud - (MD)”. Ka dibna, sannadii 1963kii Dr. Cilmi wuxuu ka soo
qaatay Jaamacadda Edinburgh ee dalka Ingriiska ( UK) shahaado sare ee Caafimaadka Guud. Af-Soomaaliga ka sukow, Dr. Cilmi wuxuu ku hadlaa luqooyinka: Ingriisiga, Carabiga, Talyaaniga, Fransiiska iyo Sawaaxiliga. Asxaabtiisa, macriifada taqaana iyo intii uu la shaqeeyayba waxay ku sifeeyeen Dr. Cilmi in uu yahay qof howl kar ah aadna u qadariya xilka la dhiibo. Mudadaa faraha badan ee uu ka soo shaqeynayey Qaramada Midoobay ayaa Dr. Cilmi Ducaale u sahlidoonta gudasha shaqadan Safiirnimada. Waana shaqsi si buuxda u matali kara jagada "SAFIIRKA SOOMAALIYA EE QARAMADA MIDOOBI" Mr. Idd Beddel Mohamed Resigned Minister CounsellorDeputy Permanent RepresentativeMr. Omar Jamal First Secretary of the Somali Mission to the United NationsProfessor Ahmed Botan DhakkarSenior Adviser |Home|